क्यावात ओली सरकार ! गरिबी घट्यो, राजश्व बढ्यो, देखियो यतिधेरै सुधार « Janata Times
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको कामको परिणाम गरिवी घटनुका साथै राजश्वमा बृद्धि भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै सो तथ्य बाहिर ल्याउनु भएको हो ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र ८ महिनाको औसत मुद्रास्फिति दर ४.२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । यस्तै प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर एक हजार ४७ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । अहिलेको मूल्यमा हिसाब गर्ने हो भने प्रत्येक नेपालीले वर्षमा औसतमा कम्तिमा १ लाख १७ हजार रूपैयाँ आर्जन गर्छन । प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आय १ लाख ५५ हजार रूपैयाँ पुगेको अनुमान छ । त्यस्तै कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको १०–१२ प्रतिशत बचत हुँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा बचत बढेर २० प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । यसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा जनाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कुल लगानी २९ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ अर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ बचतको वृद्धि भन्दा कुल पूँजी लगानीको वृद्धि उच्च रहँदा बचत र लगानीको अन्तर बढ्दै गएको छ । त्यस्तै फागुनसम्मको कुल सरकारी खर्च अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाहले गरिबी निवारणमा उल्लेख्य टेवा पुर्याएको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनीको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेको अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रस्तुत छ ।
राजस्व २१.७ प्रतिशतले बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय विभाज्य कोष र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला भएको राजस्व ५ खर्ब रहेको छ । राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१.७ प्रतिशतले बढेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १३ अर्ब रूपैयाँ अनुदान र ९३ अर्ब रूपैयाँ ऋण गरी एक खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएको छ । फागुनसम्म सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । योमध्ये ३ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण र ५ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ ।
बीमा पहुँच – १८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्यो
बैंकको शाखा संख्या – ४,७०१ ओटा (७५३ मध्ये ७१३ स्थानमा पुग्यो)
विद्युत पहुँच पुगेको जनसंख्या – ७७.८ प्रतिशत
कुल विद्युत उत्पादन– १,१४२ मेगावाट
– ६ लाख ५ हजार निजी घर
– २६२ सरकारी भवन
– ४,२०१ विद्यालय
– ६४३ स्वास्थ्य संस्था भवन
– २२१ पुरातात्विक सम्पदा
– १२४ सुरक्षा निकायका भवन
यस्तो छ आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ का प्रमुख बुँदाहरुः
२. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७.० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्ममा औसत मुद्रास्फीति दर ४.२ प्रतिशत रहेको छ।
४. शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार एवम् ऊर्जा तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी तथ्याङ्कहरुले सामाजिक एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासको सुदृढ आधारशीला तयार हुँदै गरेको संकेत गरेका छन्। आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गर्न भएका नीतिगत एवम् कानूनी सुधारको परिणाम दिगो एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुँदै गएको छ। उच्च लगानीका लागि औद्योगिक तथा पूँजीगत सामानको आयात बढ्दै जाँदा र निर्यातको आकार सीमित हुँदा उच्च व्यापार घाटा कायमै रहेको छ। यसवाट शोधानान्तर स्थितिमा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत चाप परेको छ।
१६. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ फागुनसम्म कुल जनसङ्ख्याको ७७.८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत सुविधा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ फागुनसम्म कुल विद्युत उत्पादन ११४२ मेगावाट रहेको छ भने कुल जनसङ्ख्याको करिब १८.० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट विद्युत सुविधा पुगेको छ।
१९. सन् २०१८ मा स्थलमार्गबाट आएका भारतीय पर्यटक बाहेक ११ लाख ७३ हजार पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। हवाईमार्गबाट आउने पर्यटकको अंश ८२.८ प्रतिशत र स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको अंश १७.२ प्रतिशत रहेको छ।